KenGen oo ganacsiga Carbonka ka helaysa 1.1 bilyan oo shilin - Sabahionline.com
KenGen oo ganacsiga Carbonka ka helaysa 1.1 bilyan oo shilin Luulyo 30, 2012
Shirkadda Dhalinta Korontada ee Kenya (KenGen) ayaa qorshaynaysa in ay hesho 1.1 bilyan oo shilin oo ay ka kasbanayso ganacsika Carbonka caadiga ah kadib markii la dhameystiray xaraaradda dhalinta korontada ee Ol Karia, Business Daily Afrika ayaa sidaa wariyay Axaddi (July 29-keeda). Qodobbo la xiriira
Kenya oo sii wadaysa mashruucii korantada dhulka laga dhaliyo
Maamulka Kenya ee Horumarinta Shaaha oo soo saaranaya korantada biyaha laga dhaliyo
"Mashruuca ayaa bara kicin doona ku dhowaad 1.4 milyan oo tan oo carbon dioxide ah, kaasi oo aannu rajaynayno in aan ku iibino lacag lagu qiyaasay 14 milyan oo doolar," ayuu yiri madaxa fulinta KenGen Eddy Njoroge. Dalalka soo saara wax ka badan carbon dioxide-ka u xadidan waxa ay qeybo ka iibin karaan dalalka wax yar soo saara. KenGen ayaa u isticmaali doonta 10 boqolkiiba faa'iidada iibka Carbon dioxide-ka si dib loogu maal galiyo bulshada daggan meesha ay warshadu ku taalo, Njoroge ayaa yiri. "Maaliyaddan (carbon credit) waxa aan si wen ugu sii wadaynaa in aan ku xoojino awoodaha qeybaha koronto dhalinta, waxa aan sidoo kale la qeybsan doonnaa bulshooyinka maxalliga ah," Njoroge ayaa yiri. Kenya ayaa hadda aasaaseysa ganacsigii ugu horeeyay ee carbon ah ee Afrika, Nairobi Carbon Exchange, iyadoo la kaashanaysa dhowr shirkadood oo Keenyaan ah oo xili horeba ku lug lahaa. Muxuu kula yahay qoraalkan?